सर्बाधिक धनराशीको डिपीएलको खेलाडी दर्ता सुरु, इसेवा टिकेटिंग पार्टनर – WicketNepal
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ पुष २०, बिहीबार १७:१३
यही चैत्र १७ गते देखि आयोजना हुने रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिगमा ‘इसेवा’ टिकेटिंग पार्टनरको रुपमा जोडिएको छ।
धनगढी प्रिमियर लिगमा देशभरमा ६ शहरको प्रतिनिधित्व गर्ने टिमहरुले भाग लिनेछन्। प्रतियोगिताको बिजेताले २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ जुन नेपाली घरेलु क्रिकेटकै सर्बाधिक पुरस्कार राशी हो। यस्तै उपविजेताले रु. १० लाख, तेश्रो हुने टिमले रु. ३ लाख तथा चौथो हुने टिमले रु. २ लाख पुरस्कार पाउनेछ।
यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट हुने खेलाडीले टिभीएस अपाचे १८० सिसिको मोटरसाइकल पाउनेछ भने प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले रु. १० हजार पाउनेछ। आयोजकले प्रतियोगिताको पुरस्कारको लागि मात्रै ५० लाख रुपैयाँ कम्तिमा खर्च हुने बताएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित लागत ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरु धनगढीको एसएसपी क्रिकेट मैदानमा संचालन हुनेछ। खेल हेर्न दर्शकहरुले लिग चरणमा रु. ५०, प्ले-अफ चरणमा रु. ७० तथा फाइनल खेलमा रु. १०० को टिकट काट्नुपर्नेछ।
प्रतियोगिताको लागि खेलाडी चयन अक्सन मार्फत गरिनेछ भने प्रत्येक टिमले २ जना बिदेशी खेलाडी टिममा अनिवार्य समाबेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै सबै टिमले ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत १-१ जना सुदूरपश्चिमान्चलका खेलाडी समाबेश गर्नेपर्नेछ। सहभागी ६ टिमले रणनीतिक खेलाडीको रुपमा १/१ खेलाडी अक्सन अगाडीनै चुन्नेछ जसले टिम चयन लगायत बिषयमा टिमलाई सहयोग गर्नेछ। रणनीतिक खेलाडीनै कप्तान हुनुपर्ने छैन।
डिपीएल टि-२० को लागि खेलाडी दर्ता बिहिबार देखि सुरु भएको छ। रास्ट्रिय क्रिकेट टिमका उपकप्तान तथा डिपीएलकै टिम सीवाईसी अत्तरियाका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो नाम दर्ता गर्दै खेलाडी दर्ता सुरु गरेका हुन्।
खेलाडीहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्न dpl.esewa.com.np मा गई सामान्य विवरण भरेपछि ‘बार कोड’ प्राप्त गर्नेछन् जसपछि आफ्नो नाम dplofficial.com वेबसाइटमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। दर्ताको लागि ई-सेवा मार्फत रु. १ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
धनगढी क्रिकेट एकेडेमी अध्यक्ष सुबास शाही
रास्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी भएका १ जना पुर्व खेलाडीलाई ‘धनगढी क्रिकेट सम्मान’ तथा नेपाली क्रिकेटमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका १ जनालाई ‘अर्जुन खड्का स्मृति सम्मान’ स्वरूप १-१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने डिपीएलले घोषणा गरेको छ।
धनगढी प्रिमियर लिग टि-२० को उपाधि गत बर्ष टिम पारस खड्का कप्तानीको टिम चौराहा धनगढीले जितेको थियो। फाइनलमा उसले शरद भेसावकर कप्तानीको बिराटनगर किंग्सलाई पराजित गरेको थियो।